Fanaraha-maso CCTV PM220WE
Ity monitor ambaratonga matihanina LED 21.5 "ambony ity dia manome input HDMI sy VGA. Tontonana IPS, mirehareha miloko 16,7 tapitrisa & FHD Resolution ity monitor ity dia hahatonga ny horonan-tsarinao ho velona.
Ny sary FHD dia tohanan'ny famerenam-bolo haingana haingana 180hz hahazoana antoka fa na ny filaharana mihetsika haingana dia toa malefaka sy feno tsipiriany kokoa, manome anao izay nanampy fanampiny rehefa milalao. Ary, raha manana karatra sary AMD mifanentana ianao dia azonao atao ny manararaotra ny haitao FreeSync namboarina hanaraha-maso mba hamongorana ny ranomaso sy ny fangirifiriana rehefa milalao. Ho vitanao koa ny hanaraka ny lalao marathons amin'ny alina be, satria ny monitor dia manasongadina maodely amin'ny efijery izay mampihena ny fipoahan'ny hazavana manga ary manampy amin'ny fisorohana ny havizanan'ny maso.
Fanaraha-maso CCTV PX270WE
Manara-maso input HDMI, VGA, BNC & 4in1 ity monitor n'ny LED 27 "widescreen ambaratonga matihanina ity. Miaraka amina famoahana BNC fanampiny sy 4in1 fanampiny, ny fahaizany mahay dia mamela azy hiasa amin'ny fampiharana rehetra. Mirehareha amin'ny loko 16,7 tapitrisa & FHD Resolution, ity monitor ity dia hahatonga ny fiainanao ho velona.
Fanaraha-maso CCTV PX240WE
Ity monitor ambaratonga matihanina LED 23.8 "avo lenta ity dia manome input HDMI, VGA, BNC & 4in1. Miaraka amina famoahana BNC fanampiny sy 4in1 fanampiny, ny fahaizany mahay dia mamela azy hiasa amin'ny fampiharana rehetra. Mirehareha amin'ny loko 16,7 tapitrisa & FHD Resolution, ity monitor ity dia hahatonga ny fiainanao ho velona.
Fanaraha-maso CCTV PX220WE
Ity monitor amin'ny alàlan'ny widescreen LED 21.5 "ity dia manolotra fampidirana HDMI, VGA, BNC & 4in1. Miaraka amina famoahana BNC fanampiny sy 4in1 fanampiny, ny fahaizany mahay dia mamela azy hiasa amin'ny fampiharana rehetra. Mirehareha amin'ny loko 16,7 tapitrisa & FHD Resolution, ity monitor ity dia hahatonga ny fiainanao ho velona.
Ity monitor mavitrika widescreen LED 55 "4K ity dia manolotra DisplayPort, HDMI, VGA, Looping BNC, Audio In. Ity monitor ity dia manome vahaolana avo lenta sy marina tsara, amin'ny habe mety ampiasaina amin'ny toerana rehetra. Ny bezel vy dia famaranana matihanina manome mateza sy azo itokisana mandritra ny andiany.
Fanaraha-maso CCTV PA240WE
Ity monitor ambaratonga matihanina LED 23,8 "ity dia manolotra fidirana HDMI, VGA, & BNC. Miaraka amin'ny famoahana fanampiny fanampiny BNC, ny fahaizany mamelombelona dia hamela azy hiasa amin'ny fampiharana rehetra. Mirehareha miloko 16,7 tapitrisa & FHD Resolution ity monitor ity dia hahatonga ny horonan-tsarinao ho velona.
Fanaraha-maso CCTV PA270WE
Manara-maso ny input HDMI, VGA, & BNC ity monitor an-tsary LED 27 "ambaratonga avo lenta matihanina ity. Miaraka amin'ny famoahana fanampiny fanampiny BNC, ny fahaizany mamelombelona dia hamela azy hiasa amin'ny fampiharana rehetra. Mirehareha miloko 16,7 tapitrisa & FHD Resolution ity monitor ity dia hahatonga ny horonan-tsarinao ho velona.
Fanaraha-maso CCTV PM240WE
Ity monitor ambaratonga matihanina LED 23,8 "ity dia manolotra fahan'ny HDMI sy VGA. Tontonana IPS, mirehareha miloko 16,7 tapitrisa & FHD Resolution ity monitor ity dia hahatonga ny horonan-tsarinao ho velona.